Indawo Yokuphumula Enoshukela yase-Leura okungeyakho - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Enoshukela yase-Leura okungeyakho
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Kurtis
U-Kurtis Ungumbungazi ovelele
Ungabe usabheka kude, indawo yakho yokuphumula ikulindile.
Beka phakathi kwendawo ethulile, egcwele imvelo. I-Sweet Retreat yimizuzu embalwa nje yokuhamba ngemoto ukuya e-Leura Village, egcwele izitolo ze-cafe, izitolo ze-boutique kanye nobuhle bezintaba. Imizuzu embalwa eyengeziwe yokuya e-Katoomba nazo zonke izindawo eziseduze zendawo okuhlanganisa ukubukwa kwe-Tree Sisters, i-Scenic World ne-bar ejabulisayo kanye nezindawo zokudlela.
Siyakwamukela e-Blue Mountains
Nginenjongo yokwakha le ndawo yokuhlala ehlukile enamakamelo okulala angu-3 engxenyeni engezansi yendlu yami engisanda kuqeda isakhiwo. Uzoba nobumfihlo obuphelele, kuhlanganise nendawo ehlukile yokungena, nakuba ngihlala phezulu ngingumyalezo kuphela noma ngishayelwa ucingo.
Yonke ifenisha nezinto zokudlela zisesitayeleni futhi zanamuhla. I-BBQ yangaphandle/Indawo yokuzijabulisa.
Izinto zokudlela, Amathawula, Amashidi nezinto zokugeza eziyisisekelo ziyatholakala.
Ngitholakala ukushayelwa ucingo, imiyalezo noma i-imeyili.
Ngihlala phezulu, ngicela uxhumane nami nganoma yini oyidingayo.
UKurtis Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-27439